China Kitchen Equipment fekitori uye vagadziri |JUMP
Midziyo yekutsigira yekubikira inowanzo shandiswa inosanganisira: midziyo yekufemesa mhepo, senge chiutsi cheutsi exhaust system, mhepo duct, mhepo kabati, mafuta utsi hwekuchenesa gasi remarara uye kurapwa kwemvura yetsvina, kupatsanura mafuta, nezvimwe.
Midziyo yekubikira zvinoreva midziyo nemidziyo inoiswa mukicheni kana yekubikira.Midziyo yekicheni inowanzo sanganisira zvekubikira zvekudziisa, midziyo yekugadzirisa, disinfection uye yekuchenesa michina yekugadzirisa, tembiricha yakajairika uye yakaderera tembiricha yekuchengetedza.
Iyo kicheni inoshanda nzvimbo dzeindasitiri yekudyara dzakakamurwa kuita: chikafu chisiri chekudya, chisiri-chikafu chikafu, imba yekuchengetera zvinhu yakaoma, imba yekuisa salting, kamuri yekubikira, imba yekudyira, inotonhora imba yekudyira, yekutanga kamuri yekugadziridza miriwo, nyama uye yemvura zvigadzirwa zvekugadzira imba. , imba yekurasira marara, kucheka uye kuenzanisa nzvimbo, nzvimbo yelotus, nzvimbo yekubika, nzvimbo yekubika, nzvimbo yekudyira, kutengesa uye kuparadzira nzvimbo, nzvimbo yekudyira.
1).Imba yekubikira inopisa: chitofu chegasi, kabati inopfungaira, chitofu chesobho, chitofu chekubikira, kabati yekupisa, cooker induction, microwave oveni;
2).Midziyo yekuchengetera: yakakamurwa kuita chikamu chekuchengetera chikafu, sherufu yakafuratira, mupunga uye noodle kabati, tafura yekurodha, midziyo yekuchengetera midziyo, kabati yezviyo, rekutengesa workbench, akasiyana-siyana ezasi kabati, madziro kabati, kona kabati, yakawanda-inoshanda yekushongedza kabati, nezvimwe;
3).Midziyo yekuwachisa uye yekuuraya hutachiona: inotonhora uye inopisa mvura yekugovera sisitimu, dhizaini yekugezera, dhishi yekugezesa, tembiricha yekupisa disinfection kabati, nezvimwewo, midziyo yekurasa marara inogadzirwa mukushanda kwekicheni mushure mekugezwa, chikafu chinopwanya chekudya nemimwe michina;
4).Conditioning midziyo: kunyanya kugadzirisa tafura, kupedzisa, kucheka, zvigadzirwa, modulation maturusi uye midziyo;
5).Michina yekudya: kunyanya muchina wehupfu, blender, slicer, zai rinorova, nezvimwe;
6).Midziyo yefiriji: chinwiwa chinotonhorera, ice maker, freezer, freezer, firiji, nezvimwe;
7).Zvokufambisa zvekufambisa: elevator, elevator yechikafu, nezvimwe;
Midziyo yekicheni inogona zvakare kukamurwa kuita zvikamu zviviri zvinoenderana nekushandiswa kweimba uye kutengeserana.Midziyo yekubikira yemumba inoreva midziyo inoshandiswa mukicheni yemhuri, ukuwo midziyo yekubikira yekubikira inoreva midziyo yekubikira inoshandiswa mumaresitorendi, mabara, zvitoro zvekofi uye mamwe maindasitiri ekudya.Zvokudya zvekicheni zvekutengesa nekuda kwehuwandu hwehuwandu hwekushandiswa, saka vhoriyamu inoenderana yakakura, simba rakakura, zvakare rinorema, hongu, mutengo wakakwira.
Zvakapfuura: Mugaba Hove Equipment
Zvinotevera: Muchina Wezvihwitsi Wakapfava
Single-cylinder Four-vhiri Diki Mukohwi wechibage...
Brown Shuwa Cube Kugadzira Mutsetse Brown Shuwa Ma...
Yakazara Otomatiki Ice Cream Machine Factory Supply...
Inogona Washer Customizable Yakakwirira-inoshanda Tinplat...
Chinwiwa Uye Snack Cold Type Vending Machine Wi...
Pizza Vending Machine Pizza Automatic Machine